पार्टी एकता बचाउन अध्यक्षसँग माधवको ६ बुँदे प्रस्ताव - Limbuwan khabar
पार्टी एकता बचाउन अध्यक्षसँग माधवको ६ बुँदे प्रस्ताव
सोमबार, २७ बैशाख, २०७८ बिहानको ०८:४९ बजे, लिम्बुवान न्युज
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता बचाउनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ६ बुँदे प्रस्तावसहित पत्र पेस गरेका छन्् । मध्यराती अध्यक्ष सामू पत्र नै लेखि पठाएको प्रस्ताव अस्वीकार गरे सांसदबाट राजीनामा दिने उनको चेतावनी छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालले २३ फागुनयता भएका कमजोरी औंल्याउँदै अध्यक्ष समक्ष पार्टी एकता कायमै राख्न नेपालले आग्रह गरेका छन् ।
नेता नेपालले पार्टी एकता कायम राख्न लेखेका ६ बुँदे प्रस्ताव
१. २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्ने,
२. २८ फागुनयता भएका सबै निर्णय रद्द गरिनुपर्ने,
३. पार्टी विधि, विधान र पद्धति अनुरुप चल्नुपर्ने,
४. एकअर्कामा लगाइएको आरोपहरुबारे आगामी दिनमा समीक्षा गरी निर्णय लिनुपर्ने,
५. सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने
६. पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने अनि यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने
यि उल्लेखित ६ बुँदे प्रस्ताव विपती अगाडि बढेमा सांसद पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने नेता नेपालको चेतावनी छ ।
पत्र जस्ताको तस्तै तल हेर्नुहोस्